Dowladda Shiinaha oo 2 Malyan oo Dollar ku wareejisay Hay’adda WFP – Radio Muqdisho
Dowladda Shiinaha oo 2 Malyan oo Dollar ku wareejisay Hay’adda WFP
Dowladda Shiinaha ayaa lacag gaareysa $2000,000 (Laba Milyan oo Doolar) ku wareejisay Hay’adda Cunada Aduunka ee WFP oo qeyb ka ah fulinta barnaaijyada Hay’addaasi ka waddo Soomaaliya.
Deeqdani waxay si gaar ah Dowladda Shiinaha ugu tala gashay sii wadidda Barnaamijyada WFP ee wax u qabashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ay saameeyeen isbedelkii Cimilada ee Elino.
Munaasabad kooban oo Dowlada Shiinaha ay ku wareejineysay deeqdaasi ayaa waxaa ka qeyb galay Safiirka Dowladda Shiinaha ee Soomaaliya,wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale u qeybsamaha Hay’adda WFP ee Soomaaliya Laurent Bukera isagoo sheegay in deeqdani ay ku wareejisay Dowladda Shiinaha loogu tala galay oo keliya in wax loogu qabto xaaladaha nafaqa dari da hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya C/rashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ku kalsoontahay in WFP oo lacagtaasi lagu wareejiyay, iyadoo kaashanaysa Dowladda Soomaaliyeed la gaarsiin doono meelihii loogu tala galay.
Safiirka Dowlada Shiinaha ee Soomaaliya Wei-hongton ayaa sheegay in ay sii wadayaan taageeridda Soomaaliya, isagoo ku baaqay in Dowladaha Caalamka ay u midoobaan taageeridda Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka.
Dowladda Shiinaha ayaa Soomaaliya waxa ay ka taageertaa dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada, Caafimaadka, gargaarka Biniaadanimo.
Kulan looga hadlayay arrimaha Somalida oo lagu qabtay K/Afrika
Xaaladda Degmada Afgooye oo dagan iyo ciidamada oo wado baaritaano